Usuku of Knowledge - Poltava Medical & Dental Academy
Septhemba 1, 2016, ngesikhathi Knowledge Day in the Palace yokuzilibazisa “November” Umhlangano onesizotha we-Academic Council VDNZ Ukraine “Ukrainian Medical Dental Academy”, okuyinto kulo nyaka igubha unyaka wayo wama-95. Phakathi nomhlangano ozothileyo owawuse-bazinikezela abafundi-ngonyaka wokuqala ngempumelelo sekudlule yokuncintisana emnyango vivinyo futhi zaba amalungu omkhaya enkulu omunye izikhungo ehola ephakeme Imfundo Ukraine.
In the imikhosi ubuhanjelwe koburholi be iziphathimandla zesifunda kanye zendawo, abefundisi, amalungu abaphathi, ubuhlakani, Abazali kanye nabafundi ngokwabo abafundi-ngonyaka wokuqala.
Umhlangano Omkhulu wavula by Rector-Academy, Ahlonishwe Doctor of Ukraine, MD, uprofesa, academician Ukraine Academy of Sciences Vyacheslav Nikolaevich Zhdan. Rector usamukele freshmen ne ukungena ezinhlwini abafundi Academy kanye nodokotela esizayo ufisele umsebenzi ezinezithelo futhi ngempumelelo, ukuthuthukiswa olunzulu, ukuze anqobe embi kakhulu yolwazi nokuhlangenwe afeze inhloso oyifunayo.
Wambingelela u waphenduka izivakashi zethu Dear: Abantu BakaJehova Lisekela of Ukraine, Scientist ahlonishwe of Ukraine Ischeykin KE, Poltava Mayor umama AF, Esikhundleni sokuba liSekela lomNqophisi of Healthcare Poltava Regional State Administration Kurilko Yu, Ukuphakama kwakhe kuphezu umbhishobhi Filaret Henichesk Novokakhovskiy futhi ngubani uhalalisele abafundi isingeniso ngobuqotho omunye iyunivesithi ephambili esifundeni nase-Ukraine futhi wabonisa ukuthi uyaqiniseka ukuthi iningi freshmen wamanje ukujoyina Academy futhi banda ipumelelo izwe lethu.
Umkhathi Sublime walawula ehholo ngesikhathi esimemezelweni wafunga waqinisa labafundi unyaka wokuqala, okuholela kuqeqeshwa okuhle kangaka, Ukuziphatha okuhle kanye nemisebenzi asebenzayo zenhlalo. Funda isifungo udumo umfundi ilungelo VDNZU “UMSA” enikeziwe Porovay Olesya futhi Vladimir Ksonzu. Futhi ngesikhathi ngazwi linye “ngiyafunga!” Freshmen ngokokuqala ngqá ngo-professional ekuphileni uwembathise amabhantshi abo amhlophe nezigqoko.
Ngokombiko othile Rector isiko Academy, UProfesa VM Zhdan freshman student wanika yezimfanelo ongokomfanekiso: isihluthulelo ID ulwazi umfundi wezwe.
Interesting ubuye uthole ngesimo isakhiwo ifilimu, academic, wezemidlalo, impumelelo wobuciko enyuvesi, mayelana namathuba kanye namathemba amahle kakhulu esivula freshmen Academy. Okwamanje kukhona akungabazeki ukuthi kwaba VDNZU “Ukrainian Medical Dental Academy” – isikhungo yesimanje semfundo lapho ilungiselela abaqeqeshiwe, ochwepheshe creative, ochwepheshe zangempela.
Phakathi ukuthulisa ngomzuzu imikhosi sika kukhunjulwa bawa abanikela ukuphila kwabo ngenxa ukuzimela nobuqotho ezweni lethu.
Akutholakali ukushayela busuku Dvornik A. A. Lyevshyn egameni bonke abafundi ukwazisa kwabo bonke abazali wokunakekela abazali ngoba nje, ukubekezela nothando olungenamkhawulo.
Abahlanganyeli at emhlanganweni usamukele abantu art amateur kukahulumeni Academy obuze izingoma ezimnandi nangemidanso.
Ikheli: Ukraine, Poltava, Shevchenko street,23